Yintoni eyenza iNdawo eSamoa intle kangaka kubakhenkethi?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Yintoni eyenza iNdawo eSamoa intle kangaka kubakhenkethi?
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Xanduva • Iindaba zaseSamoa eziziiNdaba
Agasti 28, 2018
Ngexesha elandayo elichithwe kwizixhobo ze-elektroniki kwaye uhlala uzifumana kwiwebhu nakwimithombo yeendaba zentlalo, abahambi abaninzi bafuna iindawo zokubuyela umva kubuchwepheshe bale mihla.
Kulungiselelwe abo bajonge ukuthatha i-detox, i-Beautiful Samoa yindawo entle engenamandla okukukhupha ngokupheleleyo kwihlabathi ledijithali.
Ifumaneka embindini weSouth Pacific phakathi kweNew Zealand neHawaii, iSamoa yaziwa njengeziqithi ezixabisekileyo zoMzantsi Pasifiki-intliziyo yokwenene yasePolynesia. Ubuhle bayo bendalo bamkela iindwendwe ngamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka, isibhakabhaka esicwengileyo kunye neelwandle ezimhlophe eziqaqambileyo.
Apha ungaphumla kuLalomanu Beach, ebizwa ngokuba yenye yeelwandle ezilishumi ezintle kwihlabathi; indawo efanelekileyo yokubuyela kwisiseko, thambisa ilanga okanye ubukele isibhakabhaka esineenkwenkwezi kunye 'nembono entle yoLwandlekazi lwePasifiki kunye neentaba ezintle zaseUpolu. Ngekhefu elipheleleyo ukusuka kubusuku kunye nobomi bemihla ngemihla, apha iindwendwe zinokukhetha indawo yokuhlala yolwandle ngaphambili kwaye zichithe ubusuku kwenye yeefasilwandle zaseSamoa. Ukulala ubusuku kwezi ndlwana zasekuhlaleni kunika amava awodwa okulala phantsi kweenkwenkwezi kunye nokwabelana ngobomi babemi bendawo.
Ngobushushu obuphakathi be-30 degrees unyaka wonke, iziqithi ezibini eziphambili zaseSamoa zibonelela ngamathuba amaninzi okunxibelelana kwakhona nendalo. Fumanisa Ku Umsele wolwandle iSua, i-30 yeemitha yomgxobhozo onzulu ogcwele amanzi olwandle, khazimla kwi Amatye e-Papaseea Sliding (izilayidi zamanzi zendalo) kwi-Upolu; zilahle kwitropiki Indawo yokugcina amahlathi emvula iFalealupo okanye umangaliswe bubuhle bayo IAlofaaga Blowholes kwi-Savai'i.
Ingcwele yokubaleka ngokugqibeleleyo, iSamoa igxile kwezona zinto zibaluleke kakhulu: abantu bayo kunye nendlela yokuphila yobudala eyi-3,000-Fa'a Samoa-isikhokelo kubo bonke abantu baseSamoa malunga nendlela yokukhokela ubomi babo ngokubhiyozela nokwamkela amaxabiso emveli, inkcubeko kunye nokusingqongileyo.
Ngolwazi oluthe kratya kutyelelo lweSamoa www.samoa.travel.